Uma iholidi wakhetha Greece, eKrethe, 4 amahhotela * kuyoba ukhetho best ukuhlala. It unikeza yokuhlala ukhululekile futhi ezingeni lelisetulu service kanye kwegumbi ngeke umangale. Omunye amahhotela kulesi sigaba kuyinto Lavris Ihhotela Bungalows 4 *. Sinikeza namuhla ukuthola leli hhotela kangcono.
Kutholwe "Lavris Bungalos 'edolobheni elincane resort ngokuthi Gouves. amakhilomitha Seven kude iyona Hersonissos, ezazidume ngokutshala ocebile ingqalasizinda yayo ukuzijabulisa. Ungakwazi ukufinyelela ke ngebhasi (stop iyatholakala eceleni kwehhotela), itekisi noma ukuqasha imoto. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane ehhotela itholakala Heraklion, 14 km. Ngakho emva kokufika emoyeni endleleni eya ethekwini "Lavris Bungalos" kuzothatha Ningabizi lutho ngaphezu kwemizuzu engu-20. Ihhotela esiseduzane ebhishi kamasipala itholakala 600 amamitha away. Ukuze ukwazi ukufinyelela kuyo imizuzu 10-15.
Ihhotela "Lavris Bungalos" (eGrisi, eKrethe nase): isithombe kanye nencazelo
Leli hhotela lakhiwa ngo-2003. I kulungiswe zokugcina owawuse lapha ngo-2009. Ihhotela kuhlanganisa isakhiwo esikhulu kanye nezinye izakhiwo eziningana. izindlu obuphelele "Lavris Bungalos" lalimelela amakamelo 110, ezinye zazo ziyizilimi kabili ejwayelekile futhi esiphakeme futhi Suites umndeni. Kusayithi avunyelwe Zonke izingane wamukelekile futhi ihlanganise izivakashi ezifuywayo ezincane (nesisindo esingaba amakhilogremu amahlanu). Lesi sakhiwo linikeza izivakashi zayo ukudla oku "isigamu-ibhodi" uhlelo, noma "zonke okufakayo". On insimu yalo kukhona ezimbili okubhukuda, ebaleni lokudlala zezingane, ilanga ithala, yokudlela kanye ibha.
Njengoba for izindleko yokuhlala kuleli hhotela, kuba ngokuvumelana bakithi asebethole ithuba lokuvula uvakashele lapha ekhangayo. Ngakho, indawo yokuhlala Lavris Ihhotela Bungalows 4 * Igumbi elisezingeni elejwayelekile (Igumbi ejwayelekile) izinyanga ezimbili ngoJulayi izinsuku eziyisikhombisa izobiza kusuka 529 euro (inikwa amandla yi-"isigamu-ibhodi" uhlelo) nokusuka 648 euro ( "zonke okufakayo"). Indawo endlini ephindwe kabili esingcono ngesikhathi esifanayo izobiza 571 kanye 691 euro ngokulandelana. ukuhlala Isonto egumbini umndeni nomunye lokulala izobiza 1022 euro.
Okuvelayo zezivakashi Russian ku Lavris Ihhotela Bungalows 4 * (Crete)
Ikhumbula yokuthi namuhla inani elandayo lezihambi lapho uhlela uhambo oluya ezweni elithile ngokuyinhloko ebhekiwe hhayi kangaka nokwaziswa mayelana ehhotela, kodwa Izibuyekezo siye lapha abantu, sanquma ukuthi ulondoloze isikhathi futhi anikeze izimpendulo generalized bakithi abaye bachitha amaholidi aseKrethe ukuba 'Lavris Bungalos "4 *. Nasi phambili, siphawula ukuthi iningi izivakashi leli hhotela kakhulu. Ngokusho kwabo, they are kasibili asidumazeki e ngesincumo sakhe, futsi leli hhotela uhambisane nendlela izindleko zokuphila kanye isigaba. Ngeke yindawo enhle ngoba amaholide eKrethe. Kodwa sifunda okwengeziwe yonke imininingwane.
AmaRashiya 'ukubukwa indawo yehhotela,
Indawo yaleli hhotela, bakithi cishe ngazwi linye waqaphela the best kakhulu. Ngakho, izivakashi enjalo Lavris Ihhotela Bungalows 4 * itholakala eduze kokubili inhlokodolobha balesi siqhingi futhi esikhumulweni sezindiza (imizuzu 20 ngebhasi). Eduze ehhotela zikhona izitolo ahlukahlukene, ungakwazi ukufinyelela kubo kwemizuzu engu-10. Indlela eya ebhishi eseduze azungeze 15 amaminithi. Endleleni ungajabulela emaphandleni ezizungezile nge ngokuthula kokudla e ezimfundeni zezimvu, izimbuzi nezinkomo, kanye olunothile izindlu emzaneni. Lokhu imvelo, ngokuvumelana abahambi, iyona amashuni engcono ukunqanda iholide unhurried futhi enokuthula. Eduze nogu kukhona inala zokudla, zindlu, amathilomu kanye nemigoqo lapho ungakwazi ukunambitha izitsha ezinkulu okuphekiwe kokubili cuisine zasekhaya nakwamanye amazwe, kanye baphathwe ezihlukahlukene iziphuzo kanye Cocktails.
Izibuyekezo mayelana ehhotela ngokwayo, emkhawulweni isibalo amakamelo
bakithi wathola indawo "Lavris Bungalos" kakhulu kahle igcinwe futhi ehlelwe kahle. Ngakho, lapha kukhona utshani amahle aluhlaza, elikhanyayo imbali-imibhede, jika ukhululekile abadala kanye nezingane, izibani enhle, nokuningi. Lapha ungakwazi hhayi kuphela ukuhamba, kodwa futhi bachitha isikhathi photo shoot okukhulu. Ukuze izivakashi abasebasha ebaleni lokudlala yezingane.
Ngokuqondene amakamelo e Lavris Ihhotela Bungalows 4 * (Heraklion), abahambi abangaphansi kwabo abatholakala ngempela libanzi futhi ahlotshiswa nje kodwa kumnandi. Ngokusho izakhamuzi nabo, ukuthi incwadi kulungiswe yamuva kwenziwa lapha. Le ndlu has konke okudingayo: TV, isiqandisi, hairdryer, njll Air conditioning kanye nezinye umsebenzi imishini ngendlela efanele ... Ngo-Igumbi ephephile ingasetshenziswa imali (mayelana 20 euro izinsuku ezingu-7). Futhi, for imali eyengeziwe inikeza ukufinyelela ku-Wi-Fi (4 euros, ngehora). Kodwa izivakashi abaningi bathola ukuthi izindleko siphezulu kakhulu futhi uthanda ukuya ibha eliseduze lapho ungakwazi ukujabulela angenamkhawulo internet mahhala, cocktail noma yimuphi omunye isiphuzo. abahambi ongumpetha batuse ukuthi labo izivakashi abafuna ukuya embhedeni ekuseni, ekufikeni ukucela amakamelo hhayi ebhekene pool, njengoba kukhona kwaze kwaba phakathi kwamabili siphela ngempela ezinomsindo ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo. Futhi, izivakashi baxwayiswa ukuthi eKrethe ehlobo eziningi omiyane. Kuyancomeka zangaphambi agodliwe esebenzisa lezi zinambuzane akhathazayo.
Njengoba for ekuhlanzeni zokuhlala, it is eyenziwa kakhulu kahle futhi njalo. Amathawula nezincekukazi zizoshintsha kuphela uma niphonsa engcolile phansi.
Ezikhona "Lavris Bungalos" (Heraklion, Crete, Greece) umelwe ikakhulukazi elandelwa abantu baseYurophu. Izakhamuzi Russian Federation nakwamanye amazwe ayengaphansi kweSoviet Union ayikwazi ukuhlangabezana lapha kaningi.
Umbono abahambi mayelana Ezokudla
Abaningi izivakashi kakhulu adunyiswe ukudla kuleli hhotela. Ngokusho kwabo, ukusebenza lapha abapheki bayizingcweti izikebhe zabo kweqiniso. Ngakho, nsuku zonke inikeza ezihlukahlukene amasaladi, izitsha hot of inyama kanye nenhlanzi, uphudingi nezithelo fresh. Hungry ukuhlala lapha akunakwenzeka. Ikakhulukazi abahambi ebona ukuyithola ungalahlekelwa kusihlwa engumKrethe, lapho uzobe inikelwe ukunambitha okuphuma phambili cuisine wendawo.
Njengoba for yokudlela ehhotela ngokwayo, ubanzi kakhulu, namathebula khulula sihlala sikhona. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ihlanganise kokubili endlini futhi phezu ithala ngaphandle. Oweta e yokudlela ayashesha kakhulu, ngakho lapha ngeke ubone izitsha ezingcolile kanye imvuthu phezu kwendwangu yetafula.
Okuvelayo abahambi izisebenzi ihhotela
Abaningi kakhulu yizivakashi ezibuka amazwe, omunye izinzuzo Lavris Ihhotela Bungalows 4 *, akungabazeki, kuyinto abasebenzi bayo. Ngakho, bonke abasebenzi balapha banobungane, emnandi futhi ikukhonzile. Bahlale bekulungele ukukulalela, ukuphendula noma imiphi imibuzo bese usize kunoma isiphi isimo. Okuwukuphela ethile okuncane izakhamuzi zethu nabo Kuyaphawuleka ukuthi abasebenzi lapha musa ukukhuluma isiRashiya. Isizathu sisobala - omningi walo izivakashi ehhotela imelelwa baseYurophu. Nokho, lena akuyona inkinga, kusukela ungahlala ukuchaza kalula ngesiNgisi eziyisisekelo noma German.
Izibuyekezo lezivakashi mayelana nokuzijabulisa lolwandle nokuzijabulisa
Kusukela ehhotela Lavris Ihhotela Bungalows 4 * sise ibanga elanele kusukela umugqa ogwini, ebhishi yangasese, ayinayo. I eliseduze ebhishi kamasipala engafinyelelwa kumaminithi 10-15, ijubane unhurried. imibhede Sun nezambulela zinikezwa ku imali ngesisekelo. Beach kuyinto pebbly futhi ahlanzekile kakhulu. Sunset emanzini angajulile. Nokho, ngokuvumelana bakithi phakathi samaholidi, kukhona ngokwanele aminyene. Uma ungeyena lazy kakhulu ukuhamba amamitha angaba ngu-500 ngasogwini, ungahlala ebhishi uhlanzekile kakhulu futhi nemnogolyudnom. Ngaphezu kwalokho, abahambi ebona kakhulu adunyiswe emabhishi Hersonissos. Ungathola kubo ebhasini futhi ukuqasha imoto.
Kunezindlela eziningana ukuzijabulisa kanye on-site "Lavris Bungalos." Ngakho, insimu yayo kukhona ezimbili okubhukuda kanye ilanga masimu. Eduze yokubhukuda esikhulu ifakwe bar nge Ukukhetha enkulu iziphuzo yonke ukunambitheka. Nokho, ngokusho kwabanye izivakashi, zona ukuyithola receptionist qasha another uweta wotshwala enkantini, kusukela kwatheleka enkulu izivakashi omunye akakwazi ukubhekana, okubangela emigqeni kwakhiwa.
Kukhona emini nantambama ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo. Ngakho, ngosuku aphethwe ezihlukahlukene fun imidlalo kanye nemincintiswano, esikhundleni sokudla evumelanisiwe, imibukiso kanye ema-disco in the kusihlwa ngasechibini.
Garcia Resort Spa 5 * Ihhotela. Turkey, Fethiye - amahhotela
Ukupheka iklabishi pie kanye amaqanda, inyama, okusemathinini
Abbot of the monastery: ngubani yena? Abaphathi bokuqala bama-monasteries